NISSAN Calendar 2013 Kalandrie - Famolavolana
Kalandrie Isan-taona dia namoaka kalandrie i Nissan eo ambanin'ny lohahevitry ny mari-pamantarana misy marika hoe "Fampientam-po tsy mitovy amin'ny hafa". Ny dikan-taonan'ny taona 2013 dia feno hevitra sy sary miavaka amin'ny maso ary vokatry ny fiaraha-miasa amin'ny mpanakanto mpanao sary «SAORI KANDA». Ny sary rehetra amin'ny alimanaka dia asan'ny SAORI KANDA mpanakanto mpanao sary hosodoko. Nataony natolotry ny fitaoman'i Nissan tao amin'ny hoso-doko izay naseho mivantana teo amin'ny efitra lamba iray izay napetraka tao amin'ny studio.
Anaran'ny tetikasa : NISSAN Calendar 2013, Anaran'ny mpamorona : E-graphics communications, Anaran'ny mpanjifa : NISSAN MOTOR CO.,LTD.
Kalandrie E-graphics communications NISSAN Calendar 2013